PVC malefaka ho an'ny tsindrona
PVC malefaka ho an'ny Extrusion
PVC hentitra amin'ny tsindrona
PVC hentitra ho an'ny Extrusion
PVC ho an'ny fitsofana
Mampiorina ny PVC Ca-Zn
PVC Stabilizer iray fonosana
Fanatsarana ny famolavolana
Mitadiava vokatra eto
Ny fangaro PVC izay fantatra ihany koa amin'ny hoe fifangaroana maina dia mifototra amin'ny fitambaran'ny resina PVC sy ny additives izay manome ny famolavolana ilaina amin'ny fampiharana farany fampiasana. Ny fivoriambe amin'ny firaketana ny fifantohana miampy dia miorina amin'ny ampahany isaky ny zato amin'ny résin PVC (PHR). Ny fangaro PVC dia azo foronina ho an'ny fitaovana malefaka amin'ny alalàn'ny plastika, antsoina hoe kompany plastika vita amin'ny PVC ary ho an'ny fampiharana henjana tsy misy plastika antsoina hoe volo UPVC. Noho ny kalitaony tsara, avo henjana ary mety ...
Granules plastika avo lenta amin'ny tsindrona ho an'ny slipper sandal
INPVC dia manolotra karazan-tsolika 100% Virgin PVC marobe ampiasaina amin'ny famokarana kiraro Kiddy Children Jelly Shoes. Ny kiraro mifangaro miaraka amin'ny fanoherana mekanika avo lenta, ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fanavaozana ary ny fisehoana ambony. Manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny serivisy. Polyvinyl Chloride Compound dia manome ny Slipper & Sandal anao malefaka avo lenta ary famaranana ambonimbony. Ny safidy loko isan-karazany dia miantoka kiraro mahasarika maso ...
Eko-namana plastika PVC vaovao ho an'ny ankizy Ankizy Boots tsindrona
INPVC dia manolotra karazan-tsolika 100% Virgin PVC marobe ampiasaina amin'ny famokarana kiraro Kiddy Children Jelly Shoes. Ny kiraro mifangaro miaraka amin'ny fanoherana mekanika avo lenta, ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fanavaozana ary ny fisehoana ambony. Manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny serivisy. Ny chloride polyvinyl polyvinyl (PVC, na vinyl) dia be mpahalala indrindra amin'ny laoniny plastika izay mametaka, miloko marevaka ary maivana. Ireo akora ampiasaina ao ...
PVC Granules mangarahara ho an'ny Ankizy Kiddy Jelly Kiraro
INPVC dia manolotra karazan-tsolika 100% Virgin PVC marobe ampiasaina amin'ny famokarana kiraro Kiddy Children Jelly Shoes. Ny kiraro mifangaro miaraka amin'ny fanoherana mekanika avo lenta, ny fahombiazan'ny fanodinana, ny fanavaozana ary ny fisehoana ambony. Manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny serivisy. Ny kiraro jelly, izay fantatra amin'ny anarana hoe jellies, dia vita amin'ny PVC tanteraka ary semi-mangarahara miaraka amin'ny famirapiratry ny jelly. Namboarina tanteraka tamin'ny PVC, ireo kapa jelly ireo dia manana de ...
Fitaovana PVC ho an'ny fametahana horonan-tsary sy horonantsary fanontam-pirinty
PVC Shrink Film - Karazana fonosana mihena ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany. Toy ny, hena vaovao, akoho amam-borona, legioma, boky, famehezana rano mineraly ary koa tavoahangy fanafody, zava-pisotro, akora simika isan'andro, fanafody, labiera ary marika sns. Ny PVC dia miorina amin'ny polyvinyl chloride. Polyvinyl chloride no plastika vokarina fahatelo indrindra eto an-tany. Misy sarimihetsika roa misy sarimihetsika PVC: marika fanontana marika Mety amin'ny famokarana na fanontana mihena tanana sy marika. Mazava ity sarimihetsika PVC ity, henjana ...
Fitaovana chloride polyvinyl malefaka ho an'ny tsindrona booty PVC
Baoty PVC fantatra amin'ny anarana hoe kiraro orana na gumboots, baoty vita amin'ny rano izy ireo vita amin'ny PVC Compound. Ny baoty PVC matetika dia ambany lohalika ary nentim-paharazana nentina tamin'ny tontolo feno fotaka na lena. Ny baoty vita amin'ny PVC dia tsy miaro fotsiny ny tongotra tsy ho lena, fa matetika koa anaovan'izy ireo hetsika maro, toy ny lamaody, jono, fambolena, fananganana, sns. Polyvinyl chloride, matetika nohafohezina ny PVC, dia polymer thermoplastic. manana ny loko mamirapiratra, mahazaka harafesina ary ...
Kamban-tànana PVC ho an'ny famokarana kiraro vita amin'ny kiraro matevina sy mena
PVC, Polyvinyl Chloride dia polymer thermoplastic izay be mpampiasa amin'ny tsindrona faladian'ny kiraro. Ny Solon'ny PVC dia vita amin'ny alàlan'ny fizotran'ny tsindrona mivantana nefa azo atao toy ny tabilao vita amin'ny micro-cellular PVC izay calendared sy tapaka. Izy io dia manana fanoherana tsara sy malefaka miaraka amina vidiny manintona. Ny faladian'ny PVC dia misy koa insulate sy fanoherana tsara. Izy ireo dia mahomby ary koa mifandimby amin'ny hoditra. Miaraka amin'ny fianarana sy fanandramana traikefa amin'ny indostria fitaovana ho an'ny mor ...
PVC Granules ho an'ny tsindrona Slipper Uppers V-Straps
Izahay dia iray amin'ireo mpisava lalana amin'ny indostrian'ny fitambaran-javatra PVC any Sina. Ireo fitambarana ireo dia namboarina manokana sy novokarina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny vanim-potoana maoderina miaraka amin'ny fanampian'ny milina maoderina indrindra misy amin'izao fotoana izao. Izahay dia mahazo antoka fa hahatratra ny fenitra iraisam-pirenena ary hitazona ny kalitaon'ny vokatra isaky ny teboka famokarana. Ny Compound PVC Strap dia amboarina amin'ny alàlan'ny fitaovana ara-tontolo iainana amin'ny mari-pana mahamety ary be mpampiasa amin'ny tadiny sy ny tadiny ...
Kamban-tanana PVC ho an'ny fantsom-pifandraisana tariby sy tariby
Ny fantsom-pifandraisana PVC dia fitaovana thermoplastic azo avy amin'ny fanodinana ny polyvinyl chloride kompositions, novokarina ho granules. Ny fananana isan-karazany dia omena fitambarana arakaraka ny fampiharana sy ny toe-javatra iasan'ny singa. Ny granules Cable PVC dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny tariby sy ny conducteur amin'ny fanamboarana insulation sy wire protection ary palitao. Ny valan-javaboary PVC General Sheathing grade dia amboarina amin'ny alàlan'ny akora praiminisitra grady praiminisitra voalohany, manaraka tsara ny RoHS (Heav ...
Kamban-kazo miovaova ho an'ny kiraro biby PET
INPVC dia manolotra karazan-tsolika 100% Virgin PVC marobe ampiasaina amin'ny famokarana tsindrona kiraro biby. Ny akanjon'ireo biby fiompy PVC dia misy granules manana fanoherana mekanika avo lenta, fahombiazan'ny fikirakirana, fanavaozana ary fisehoana ambony. Manome famolavolana namboarina sy manokana arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fiantohana ny kalitao sy ny serivisy. Fitaovana 100% resina PVC virjina + Fitaovana ara-tontolo iainana Hardness ShoreA40-50 Density 1.18-1.22 / cm3 Fanodinana tsindrona ...
PVC Granules dia mitambatra tsindrona tsindrona ho an'ny kiraro
Niorina tamin'ny taona 1993, ny vondrona INPVC dia iray amin'ireo mpanamboatra mpamokatra PVC Compounds sy PVC Granules any China. Manamboatra singa misy kiraro sy kiraro izahay izay ampiasaina amin'ny milina fanindronana tanana sy mitsangana ary milina semi automatique. Ao amin'ny INPVC, manome pellets PVC be dia be izahay izay azo ampiasaina hanamboarana kiraro ambony sy faladiany. Manolotra fitaovana plastika kiraro an-kiraro PVC amin'ny fanao isan-karazany sy famolavolana manokana arakaraka ny d ...
Tsindrona, fitrandrahana ary fikolokoloana
PVC malefaka amin'ny tsindrona